Salaamanews » Madaxweyne Xasan Sheekh oo lagu soo dhaweeyay Sudan
Home » Warar Madaxweyne Xasan Sheekh oo lagu soo dhaweeyay Sudan Print - Daabace: SalaamaNews - Jan 1st, 2013 // Ka Jawaab	Qoraallo La Xiriira
Madaxweyne Xasan Sheekh oo la kulmay dhigiisa dalka Sudan Cumar Al-bashiirLabada Sudan oo heshiis uu dhexmarayRa’isal wasaaraha Kenya oo la taliye u soo magacaabay SoomaaliyaMadaxweyne Maxamuud oo warqadaha aqoonsiga ka gudoomay safiirka cusub ee koofurta KuuriyaRa’isal wasaare Saacid oo markii ugu horreysay dalka ka baxay, dalal dhowr ahna booqan-doona
(Salaamanews)-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo Salaasada maanta ah ka tagay Muqdisho ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay dalka saaxibka la ah Soomaaliya ee Sudan.
Mr. Maxamuud ayaa Sudan kaga qeyb galaayo sanad guuradii 57-aad ee ka soo wareegtay markii ay xorriyada qaadatay dowladda Sudan, waxaana la rajeynayaa in madaxweynuhu uu halkaasi ka jeediyay khudbad dhiirra galin ah.
Mr. Maxamuud ayaa wuxuu kaga qeybgalayaa munaasabadan oo ka dhacaysa magaalada Damaaziin ee gobolka Blue Nile, waxaana halkaasi tagi doonaa masuuliyiin caan ka ah wadamada Africa.
Munaasabadan ayaa la sheegay in sidoo kale lagu furayo mashruuc biyo xireen ah oo ay dowlada Suudaan ka hirgelisey gobolka Blue Nile.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa lagu wadaa in uu wadahadalo la yeesho madaxweynaha dalka Suudaan Cumar Xasan Al Bashiir iyagoo ka wadahadli doona xiriirka labada dal ee Soomaaliya iyo Suudaan.
Dalka Suudaan ayaa waxaa ku sugan boqolaal dhalinyaro Soomaali ah oo wax ka barta jaamacadaha ku yaal dalkaasi.
Madaxweynaha ayaa la filayaa inuu la kulmi doono jaaliyadda Soomaaliyeed, ee wadanka Sudan, waxaana socota qaban qaabada munaasibad ay sameyneyso jaaliyadda Sudan.
Madaxweynaha ayaa safarkiisa Sudan kadib la filayaa inuu tago dalka Britain halkaasina wuxuu ka sii aadi doonaa dalka Koofur Africa, wuxuuna kula ballan sanyahay madaxda South Africa.
Tags: warar « Qoraalkii HoreLixdameeya qof oo u dabaal dagayay sanadka cusub ayaa ku dhintay Nigeria	Qoraalka Xiga »Ethiopian court finds 10 guilty of forming terror cell with links to Somalia’s al-Shabab	Halkan Hoose ku Jawaab